ဖုန်း Bill မကုန် အောင် Internet အသုံးပြု နည်း slect ဆွဲပြီးတော. စာကိုဖတ်ပါ.. ~ (IT) ကိုထိုက်
4:38 AM5comments
---Name နေရာမှာ 3G free (any) Type 1 WAP လို့ဖြည့်လိုက်ပါ
---APN နေရာမှာ wapwest.cellone.in လို့ရေးပေးပါ
---Proxy နေရာမှာ 110.100.3.2 လို့ရေရးပါ
---Port နေရာမှာ 9209 လို့ရေးပါ
---User name နေရာမှာ ppp လို့ထည့်ပါ။
---Server နေရာမှာ 110.100.3.2:9209 လို့ထည့်ပါ။
ပြီးရင် Save လုပ်ပြီး ခုလုပ်ထားတဲ့ APN ကို ON ခဲ့ပါ။ ပြီးရင် အင်တာနက်ကို On လိုက်ပါ သိုမဟုတ် Use packet data ကို အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ အင်တာနက် မရသေးပါဘူး ရအောင်လုပ်ရပါအုံးမယ်
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Kali Linux OS တင်ထားတဲ့ computer မှာ usb tethering ကို on လိုက်ရပါမယ် အင်တာနက်တက်ပြီးဆိုတာနဲ့ Moblie ကရော ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာသွားသုံးလို့ရပါပြီ တစ်ခါ on ချင်ရင် တခါ kali ကိုပြေးရမှာနော် MPT က မပိတ်သရွေ့တော့ရနေပါလိမ်မယ် ပိတ်သွားရင် တားတားလဲမတတ်နိုင်ပု ဟိဟိ။
ဖြည့်စွက်ချက်။ လိုအပ်ချက် တစ်ခုရှိသွားတယ်ဗျ kali မှာသုံးမှ မဖြတ်တာ ကျန်တာတွေမှာဖြတ်တယ်နော် ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမပိတ်ခင် အင်တာနက်အရင်ပိတ်ရတယ်။ မနေ့က kali OS (Gnome) နဲ့ သုံးတာ မဖြတ်လို့ ဒီနေ့ backtrak နဲ့သုံးတော့ ဖြတ်သွားတယ် မကျေနပ်လို့ kali နဲ့ ပြန်သုံးတာ မဖြတ်ဘူး kali ကိုနဲ့အဆက်သွယ်မဖြတ်ခင် အင်တာနက်ကိုအရင်ပိတ်ဖို့မမေ့နဲ့အုံးဗျ။
Special Credit: Than Moe
Devid Terry August 14, 2015 at 3:22 AM
pai ko March 29, 2016 at 1:30 AM
kali linux က computer os လား ဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရလား
Unknown April 5, 2016 at 12:58 AM
အုန်း​နောက်​​ခြောက်​တယ်​ အ​ပေးအယူ​တော့ရှိရမှာ​ပေါ့ တကယ့်​bill hank ချင်​ရင်​မသုံးဘဲဖုန်းကဒ်​ကိုပိတ်​ထားလိုက်​အဲ့ဒါဘယ်​အ ချိန်​ဖုန်း​ဘေ စစ်​စစ်​ အဲ့​လောက်​ကမ​လျော့ဘူး မယုံရင်​စမ်းကြည့်​
Tom&Jerrry. tas June 20, 2016 at 1:52 PM
စမ်းသုံးဖိုတော့ ready ဖြစ်နေပြီး Os download ဆွဲဖိုပဲကျန်တော့တယ် :)
Tom&Jerrry. tas June 30, 2016 at 9:45 AM
အခု Comment ရေးအချိန်မှာ နောက် 1နာ၇ီ2လောက်ကျရင် Os install လုပ်မယ် နောက်ပြီး စမ်းတော့မယ် all ready ဖြစ်နေပြီ :)